Bit By Bit - အနာဂတ် - 7.2.3 သုတေသနလုပ်ငန်းဒီဇိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား
သီးသန့်လုံခြုံရေး &amp; သဘောတူညီချက်
1.1 တစ်ဦးမှင် blot
1.4 ဤစာစောင်၏ Themes
2.2 နဲ့ Big ဒေတာ
2.3.1 နဲ့ Big
2.3.8 algorithm သည်ရှက်ကြောက်
2.4.2 ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် nowcasting
4.3 စမ်းသပ်ချက်နှစ်ယောက်ရှုထောင်: ဓာတ်ခွဲခန်း-Field နဲ့ Analog-ဒီဂျစ်တယ်
4.4 ရိုးရှင်းတဲ့စမ်းသပ်ချက် ကျော်လွန်. Moving
4.5.2 သင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှု Build
4.5.3 သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန် Build
4.6.1 သုည variable ကိုကုန်ကျစရိတ်ဒေတာ Create
4.6.2 သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းသို့ကျင့်ဝတ် Build: အစားထိုးမွမ်းမံနှင့်လျှော့ချ
5 အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating
5.2.1 က Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံ
5.2.2 နိုင်ငံရေးအရစာတမ်းတွင်၏လူအုပျ-နိုင်တဲ့ coding
5.3 ကို Open ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
5.3.1 Netflix နဲ့ဆု
5.4 Distributed ဒေတာစုဆောင်း
5.5.4 အံ့သြ Enable
5.5.5 ကျင့်ဝတ် Be
5.5.6 Final ဒီဇိုင်းအကွံဉာဏျ
6.2.2 အရသာ, ဆက်ဆံရေးနှင့်အချိန်
6.4.1 Persons များအတွက်လေးစား
6.7.1 အဆိုပါ IRB တစ်ဦးကြမ်းပြင်, မတစ်ဦးမျက်နှာကြက်သည်
6.7.3 discrete, စဉ်ဆက်မပြတ်မအဖြစ်သုတေသနလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်၏စဉ်းစားပါ
7.2 အနာဂတ်မှာ၏ Themes
7.2.1 readymades နှင့် custommades ၏ blending
7.3 Back ကိုအစအဦးမှ
ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာတော့ကျင့်ဝတ်သုတေသနပုံဖော်ထားတဲ့ ပို. ပို. အလယ်ပိုင်းပြဿနာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သောအနာဂတ်ကာလ၌, ငါတို့ပြုရပါမည်အဘယ်အရာကိုပိုမိုပြုမိခြင်းနှင့်ရနိုင်ရာနှငျ့လျော့နည်းရုန်းကန်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်, ငါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို-based ကြောင့်မျှော်လင့်ထားချဉ်းကပ်ဖြစ်ပျက်နှင့်အခြေခံမူ-based အခန်း6မှာဖော်ပြထားတဲ့ခါနီးတူသောဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များ၏ ad hoc ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုခုဆီသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်သကဲ့သို့ငါသည်လည်းကျင့်ဝတ် ပို. ပို. အလယ်ပိုင်းဖြစ်လာသကဲ့သို့, လိမ့်မည်မျှော်လင့် အတိုင်းအတာများသုတေသနတစ်ခုခေါင်းစဉ်အဖြစ်မပေါက်ပါဘူး။ လူမှုရေးသုတေသီများသည်ယခုစျေးသက်သက်သာသာနှင့်ပိုပြီးတိကျမှုခန့်မှန်းချက်ကို enable အသစ်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်မွှုပျနှံတာတူညီသောလမ်းအတွက်ငါငါတို့သည်လည်းပိုပြီး Ethics တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား။ ဤပြောင်းလဲမှုသုတေသီများအဆုံးသတ်အဖြစ်ကျင့်ဝတ်ကိုဂရုမစိုလို့ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကလူမှုရေးသုတေသနပို့ချရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ကျင့်ဝတ်နှင့် ပတ်သက်. ဂရုစိုက်လို့။
ဒီလမ်းကြောင်းသစ်တခုရဲ့ဥပမာ differential ကို privacy ကိုအပေါ်သုတေသနပြုဖြစ်ပါတယ် (Dwork 2008) ။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးဆေးရုံကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းများအသေးစိတ်ထားပြီး, ထိုနှင့်သုတေသီများသည်ဤဒေတာအတွက်ပုံစံများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုခငျြသညျဆိုပါစို့။ differential ပုဂ္ဂလိက algorithms မဆိုအထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာမှသင်ယူ၏အန္တရာယ်အသေးအဖွဲအနေဖြင့်စုစုပေါင်းပုံစံများ (ဥပမာ, ဆေးလိပ်သောက်သူတွေကိုကင်ဆာရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်) အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်သုတေသီများကို enable ။ ဤအ privacy ကို-ထိန်းသိမ်း algorithms များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသုတေသနတစ်ခုတက်ကြွဧရိယာဖြစ်လာသည်; တွေ့မြင် Dwork and Roth (2014) စာအုပ်-အရှည်ကုသမှုများအတွက်။ differential privacy ကိုသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုယူပြီးသုတေသနစီမံကိန်းကိုသို့လှည့်, ပြီးတော့ပေါ်မှာတိုးတက်မှုအောင်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ ပို. ပို. လူမှုရေးသုတေသန၏အခြားဒေသများရှိမြင်ရပါလိမ့်မည်ထင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သုတေသီများ၏တန်ခိုးနှင့်အမျှမကြာခဏကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရများနှင့်ပူးပေါင်း, ကရှုပ်ထွေးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရှောင်ရှားရန် ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအများအပြားလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ဒေတာများသိပ္ပံပညာရှင်များရှောင်ကြဉ်ဖို့ရွှံ့အဖြစ်ကဤကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရှုမြင်သောငါ၏အတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ဒါပေမယ့်ငါရှောင်ရှားခြင်းဟာမဟာဗျူဟာအဖြစ် ပို. ပို. untenable ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်အတွက်ခုန်လျှင်အသိုင်းအဝိုင်းအဖြစ်ဤပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ပြီးကျနော်တို့ကတခြားသုတေသနပြဿနာများလျှောက်ထားသောဖန်တီးမှုနှင့်အားထုတ်မှုသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်။